Koboca Dhaqaalaha iyo Shaqo-Abuurka - Cabdiraxmaan Cirro - Presidential Candidate- WADDANI-Somaliland
Xukuumadda Xisbiga WADDANI waxay:
Koru qaadaysaa wax-soo-saarka soo-jireenka ah:in ay koraan oo is-beddelna ku dhaco habka wax-soo-saarka xoolaha, beeraha, kalluumaysiga iyo xabkaha. Waxa lagu korinayaa iyada oo heerka wax-soo-saarka cashuurta laga khafiifinayo, loo furayo ilo maal-gelineed, iyo in cilmiga/teknoolajiyada cusub iyo hal-abuurba la adeegsanayo.
Xaqiijinaysaa soo saaridda khayraadka shidaalka iyo macdanta kale ee dalka ku jira, si horumarka dhabta ah ee ay higsnayaan muwaaddiniinta Jamhuuriyadda Somaliland ay dhakhso ugu gaadhaan.
Kobcinaysaa qaybta maaliyadda ee dhaqaalaha(financial sector)ee soo koraya si uu u bixiyo adeeg hufan una badhi-taaro gancsiga dhoofinta, si shaqo-abuurku u xoogaysto.
Dhiirri-gelinaysaa is-kaahsiga iyo isu-furidda dhaqaalaha gobolka Geeska Afrika, iyada oo la iska kaashanayo kaabayaasha isku xidhaya dalalka sida waddooyinka, tareennada, xidhiidhka korontada, is-gaadhsiinta iyo isu-socodka badeecadaha iyo dadkaba.
Dhiirri-gelinaysaa hal-abuurka dhalinyarada:sida hibooyinka iyo hindiseyeyaasha ganacsi ee dhallinyarada iyo soo-tallaalka teknooljiyada habboon, horumarinta aqoonta gudaha iyo fidinta guulaha midho-dhalka noqda (best practices).
Kobcinaysaa aqoonta iyo awoodda haweenka:si ay bayac-mushtar u sameeyaan, iyada oo mashaariic u gaar ah loo abuurayo, laguna xidhayo kuwa caalamka ka hirgalay ee ku habboon,
Ka faa’iidaysandoontaa barteenan qiimahaweynleh: waa barta ay Jamhuuriyadda Somaliland caalamka kaga taallo, taas oo isku xidha dalalka dhaqaalahoodu koray ee Galbeedka iyo kuwa xawliga ku soo koraya ee Bariga, isla markaana noqon karta kadin muhiim ah oo Afrika laga galo.
Maalgelinta kaabayasha Dhaqaale ee waaweyn: Waddooyinka, madaarrada, dekedaha, tamarta korontada, ilaha maalgashiga, biyaha, iyo guud ahaanba korriinka xirfadaha adeegsiga teknooljiyada casriga ah.
Maanta, waxa lagu tiriyaa Jamhuuriyadda Somaliland in dunida ay saddex dal oo keli ahi ka saboolsan yihiin. Waxa kale oo lagu qiyaasaa in 38% dadka miyiga iyo 29% dadka magaalada ay khadka saboolnimada ka hooseeyaan, taas oo ah mid aan la eegan karayn. Xukuumadda Xisbiga WADDANI, waxay mudnaan gaar ah siinaysaa in ay dadka Jamhuuriyadda Somaliland uga gurmato saboolnimada ku raagtay oo ay dadaal xoog ah geliso sidii ay yarayn lahayd tirada dadka saboolka ahi.
Xukuumadda Xisbiga WADDANI waxa kale oo ka go’an samaynta fursadaha dadka saboolka ah u suuro-gelinaya: waxbarashada, helidda biyo nadiif ah, adeegyada caafimaad ee aasaasiga ah iyo kuwa nadaafadeedba, waxaana ay yaraynaysaa kala-sarraynta fursadaha shaqo ee gobollada iyo muwaadiniinta.
Samaynaysaa Hay’adda Dedejinta Horumarka Gobolloda Bari oo dhaqaale ka helaysa miisaaniaydda qaranka, deeq-bixiyeyaasha iyo deeqaha shirkadaha gaarka ah.
Qaabaynaysaa hannaan maamul-maaliyadeed oo bulshada miyiga ku dhaqani ay ku samaysan karto qorshe kayd, si ay u maamushaan dakhliga soo gala wakhtiyada suuqu u furanyahay sida xilliyada Xajka iyo wax-soo-saarka kaleba.
Maarayneysaa sicir-bararka ka imanaya dollar-ka’ heehaabaya, kaas oo sii kordhinaya saboolnimada iyada oo isla markaana la dhaqan-gelinayo adeegsiga buuxa ee shilinka Jamhuuriyadda Somaliland.
Habaynaysaa deeqaha cuntada si loogu daryeelo hadba sida ay dadku u-kala- jilicsan yihiin.
U qorshaynaysaa dhaqaale joogta ah dadka jilicsan gaar ahaan agoomaha iyo carruurta saboolka ah iyada oo ay iska kaashanayaan Dawladda Dhexe, Dawladaha Hooseba iyo samafalaayaashuba.
Samaynaysaa siyaasad cashuur-dhimis cuntada iyo baahiyaha kale ee lagama-maarmaanka ah, gaar ahaan xilliyada seben-xumaadka, sida abaaraha.
Hubinaysaa in heerarka dawladda ee kala-duwani fuliyaan xilka dastuuriga ah ee ah in ay gaadhsiiyaan dadka adeegyada asaasiga ah sida daryeelka caafimaadka, waxbarasho, cuntada, hoyga iyo nabad-gelyadaba.
Samaynaysaa mashaariic daryeel caafimaad ah oo ay ku jiraan daaweynta iyo daryeelka hooyada, ka-hor-tagga iyo daaweynta cudurrada faafa sida HIV-AIDS.
La-dagaallamaysaa musuq-maasuqa, eexda, qaraabo-kiilka, ku-danaysiga awoodaha xilalka dawladnimo, iwm, iyada oo lagu dhaqmayo xukun-wanaag iyo habka dimuqraaddiga
Daryeelka barakacayaasha ay sababaan aafooyinka ay ka mid yihiin abaaruhu.
Xakamaynaysaa xaaladaha saboolnimada badiya sida kala-tagga korriinka gobolada dalka, miyiga iyo magaalada iyo ta ka timaaadda takoorka nooca uu doono ha ahaadee.
Shaqo-Abuurka iyo Kor-U-Qaadista Dakhliga Muwaaddinka:
Waxa ka go’an Xukuumadda WADDANI, in ay si wax-ku-ool ah uga hawl-gasho yaraynta shaqo-la’aanta iyo saamaynteedaba. Waxay kor u qaadaysaa farsamaynta iyo ka-faa’iidaysga qaybaha kala duwan ee wax-soo-saarka xoolaha nool, hirgelinta iyo ka-faa’iidaysiga ganacsiga dalalka isaga gudba, sida Somailand iyo Ethiopia, kor-u-qaadista wax-soo-saarka gudaha ee cuntada iyo qalabkaba. waxa la hir-gelinayaa maal-gashiga khayraadka miyiga ee xoolaha, beeraha, kalluumaysiga iyo xabkahaba.
Hirgelinta mashaariicda dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha oo shaqaale badan hawlgelinaya, gaar ahaan gobollada culays dhib-u-dhaca dhaqaale gaar u haysto.
Kor-u-qaadista xirfadaha farsamo ee dhallinyada, gaar ahaan kuwa dulman,
Daryeelka xoolo-dhaqatada iyo kobcinta dhaqaalahooda si kor loogu qaado noloshooda oo ay uga maarmaan u-guuridda magaalooyinka.
Maal-gelinta iyo ka-faa’idaysiga awoodda dadka iyada oo loo samaynayo xirfado tayo leh oo la xidhiidha dhinacyada waxbarashada iyo teknoolajiyada casriga ah ee loo soo gaabiyo ICT’.
Soo-jiidashada maal-gashi mug leh oo caalami oo ku waajahan dhismaha kaabayaasha dhaqaale, qodista shidaalkeenna iyo ka-faa’idaysiga khayraadkeenna beeraha, xoolaha, kalluumaysiga, xabkaha iyo dadkaba.
Hababka xoolaha nool looga dhalinayo shaqo-abuuris:
Waxa cilmi iyo aqoon casri ah loo adeegsan doonaa sida aynu xoolaha u dhaqanno ugana faa’iidaysanayno, iyada oo la adeegsanayo wacyi-gelin sida: TVyada, raadyowga iyo qalabka warbaahinta ee kale si kor loogu qaado aqoonta xoolo-dhaqatada iyo wax-soo-saarkooda.
Xoojinaysaa daryeelka caafimaadka xoolaha iyada oo mudnaanta la siinayo tayada iyo tirada dhakhaatiirta iyo shaqaalaha ku hawlan daryeelka xoolaha nool.
Xoojineysaa isla markaana tayeyneysaa kooxaha daaweynta xoolaha ee wareega.
Ka-haqab-tiraysaa dhinaca biyaha ee xoolaha iyo dadka miyiga. Waxay casriyeynaysaa balliyadii iyo warahii hore ee xoolo-dhaqatadu ku tiirsanayd.
Samaynaysaa keydad biyood, caws, dawo iyo cuntaba, taas oo looga jeedo si dhibaatada jiilaalka iyo abaaraha soo noq-noqda looga gaashaanto oo dadka iyo duunyadaba looga badbaadiyo.
Hirgelinta mashruuca shinnida ama abuurka digaagga lagu badiyo, si casri ahna loogu fidiyo dhaqashadiisa oo ay iska kaashadaan Dawladda iyo ganacsiga gaarka ahi.
Daryeelka dhulka daaqeenka ah iyo dib u soo-noolaynta tayadiisa maanta qiirqiirka ku jirta iyo maaraynta maamulka dhulka iyada oo loo kala saarayo dan guud iyo mid gaar ah. Waxa la sii xoojin doonaa hay’adaha ka shaqeeya degaanka iyo hawlgallada cilmiyeysan ee
Taageerada in la cilmiyeeyo wax-soo-saarka calafka xoolaha, la tijaabiyo calafka nafaqada leh kuna habboon cimiladeenna, la faafiyo calafkaas isla markaana la soo saaro isagoo warshadaysan.
Tayeynta Suuq-Geynta Xoolaha Nool:
Xukuumadda Xisbiga WADDANI waxay ku tallaabsann doontaa:
Habaynta iyo hagaajinta adeegga seyladda xoolaha, marinka dhoofinta, maxjarka, dekedda iyo maraakiibta doofintaba.
Dhimista iyo dib-u-eegidda culayska cashuuraha iyo takaaliifta kala duwan e xoolaha dhoofaya saaran, si ay ugu iibsami karaan suuqyada Khaliijka Carbeed iyo caalamka kale ee loo tartamayo.
Dib ugu celinta qayb ahaan dalkhliga ka soo baxa takaaliifta iyo cashuuraha laga qaado, si loo xoojiyo daryeelka xoolaha nool iyo dadka dhaqaaya.
Dhiirri-gelinta warshadaynta qaybaha kala duwan ee neefka, dhoofinta hilibka qalan iyo in suuq looga raadiyo Bariga Dhexe, Afrika, Aasiya iyo meel kasta oo kaleba.
Raadinta Maal-gashi loo adeegsado ama lagaga faa’iidaysto hababka casriga ee xoolo-dhaqashada (Ranching) iyo naaxintoodaba, si gaar ahna loogu dhiirri-gelinayaa dhallinyrada la jaanqaadaysa habkaas.
Dhiirri-gelinta iyo taageerada dhaqashada digaagga si loo daboolo marka hore baahida suuqa gudaha ee soo kordhaysa, mar labaadkana si kor loogu qaado heerka nafaqo ee miyi iyo magaaloba iyada oo laga taageerayo aqoonta iyo hababka casriga ah ee loo dhaqo digaagga, iyo wixii kale ee la dhaqi karo sida laamaha iyo bakaylaha.
Shaqo-abuurka iyo kor-u-qaadista wax-soo-saarka beeraha:
Xukuumadda Xisbiga WADDANI waxay dhiirri-gelin doontaa:
Maal-gelinta cilmi-baadhis iyo kaydka aqoonta beeraha oo lagu astaynayo sida dhulkeennu ugu kala habboon yahay midhaha iyo dalagyada kala duwan. Waxay xoojinaysaa Machadyada iyo Shay-baadhada ku hawlan wax-soo-saarka beeraha.
Kor-u-qaadista aqoonta iyo xirfadaha beeraleyda iyada oo laga wacyi-gelinayo warbaahinta, lana siinayo tababarro casri ah, laguna taageerayo aqoonyahanno ka caawiya beeraha.
Cilmiga beeraha oo lagu daro heerarka kala duwan ee manaahiijta waxabarashada dalka.
Hirgelinta mashaariic maal-gashi oo dhulka ku habboon beerista lagaga faa’iideeyo, sida bananka iyo dooxooyinka.
Taageerada beeraleyda yar-yar oo la siiyo saacado cagaf-cagaf, dibi, abuur, bac-rimin, daaweynta dulinka beeraha, biyo-xidheenno iyo mishiinno waraab.
Maamulka soo-dejinta, keydka iyo kor-u-qaadista abuurka midhaha degaankeenna iyo tijaabada kuwa loo aqoonsaday nafaqada dheeraadka ah sida: Quinoa’, fuulka iyo midhaha saliidda cuntada laga dhaliyo.
Maalgelinta 95,000 saacadood oo taageero cagaf-cagaf ah oo la siiyo beeraleyda, si loo xaqiijiyo hiigsiga WADDANI ee Heerka wax-soo-saarka quudinta qaranka (National Food Security)
Xoojinta awooddeena waraabka beeraha iyada oo aynu ka faa’iideysanayno biyaha togagga cararaya iyo dhaammaan kuwa buuraleyda ka rogmada ee badda gala.
Wacyigelinta beeraleyda iyo Fidinta aqoonta waraabka ku dhisan habka tashiilka biyaha waraabka iyo qabashada biyaha roobka.
Samaynta kaydka shinnida (seed bank) ee Jamhuuriyadda Somaliland iyo ilaalinta tayada siidhkaas, iyo in la xakameeyo siidhka dibadaha innooga yimaadda, gaar ahaan ka marka kaliya baxa.
Samaynta carwada shinnida iyo soo nooleynta dhaqankii jirijiray ee qabanqaabiinta sannadlaha ahaa ee carwada wax-soo-saarka dalka.
Samaynta xeerka iyo hab-raaca badbaadada dhirta ; kuwa la beero iyo kuwa kaymahaba (Plant protection law).
Hagaajinta Suuq-Geynta Dalagga Beeraha:
Dhismaha waddooyin isku xidha degaannada beerleyda iyo waddooyika halbowlaha ah ee magaalooyinka waaweyn taga iyo ku-baahinta is-gaadhsiinta casriga ah.
Hagaajinta suuqyada lagu iibiyo dalagyada oo loo sameeyo adeegyada biyaha, korontada, qaboojiyaasha, makhaasiinada, fayo-dhowrka, iyo is-gaadhsiinta.
Dhiirri-gelinta midhaha beeraha dalkeenna iyada oo la maaraynayo soo-dejinta midhaha la midka ah.
Sahaminta suuqyo dibedda ah sida gobolkeenna iyo khaliijkaba, kuwaas oo loo dhoofiyo dalagga beeraha Jamhuuriyadda Somaliland.
Wacyi-gelin dalka laga sameeyo si loo dhiirri-geliyo cunista dalagyada waddaniga
Dhiirri-gelinta iskaashiga beeraleyda si uu kor ugu kaco wax-soo-saarkooda iyo xirfadda suuq-geyntu.
Hay’adaha samafalka cuntada ah bixiyaa waa in ay midhaha dalka iibsadaan intii ay ka heli karaan baahidooda.
Horumarinta Shaqo-Abuurka iyo Wax-Soo-Saarka Xabkaha:
Qaybta xabkuhu waxay ka geli kartaa meel muhiim ah, korriinka ay hiigsnayso Jamhuuriyadda Somaliland, ee dhica dhaqaalaha iyo shaqo-abuurka. Waxa hortaaggan caqabado la xidhiidha wax-soo-saarka iyo suuq-gaynta xabkaha iyo daryeel la’aanta dadka ka shaqaysta iyo degaanka laga guro.
Korinta dhaqaalaha xabkaha iyada oo bar-tilmaansanaysa in suuqyada caalamka looga aqoonsado, kuna suntamaan xabkuhu, khayraad muhiim ah oo Jamhuuriyadda Somaliland leedahay.
Mudnaan gaar ah laga siiyo siyaasadaha dhaqaalaha dalka ee kobcinta wax-soosaarka iyo ganacsiga iyada oo maal-gelin loo qoondaynayo.
Hirgelinta daraasad qoto-dheer oo lagu qiimaynayo baaxadda dhaqaalaha Xabkaha iyo heerka shaqo-abuurkiisa la gaadhiis karo.
Hirgelinta cilmi-baadhis iyo adeegsiga tiknoolajiyada iyada oo la samaynayo shay-baadho casri ah oo lagu horumariyo wax-soo-saarka xabkaha lana hiigsanayo warshadaynta dhaqaalahooda.
Daryeelka dhirta Xabkaha ee ay ka midka yihiin Meydiga, Moxorka, Malmalka iyo Xabkaha la cuno, iyo guud ahaan degaanka ay ka baxaan.
Horumarinta bulshooyinka ka shaqaysta xabkaha iyada oo la Gaadhsiinayo adeegyada caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo waddooyinka gaar ahaan dhulka go’doonka buuraleyda ah ee Xabkuhu ka baxaan.
Taageerada shirkadaha iyo is-kaashatooyinka maal-gashanaya wax-soo-saarka iyo suuqgeynta xabkaha ee shaqo-abuurka samaynaya, iyada oo la dhiirri-gelinayo habka iskaashiga dawladda iyo dadka.
Horumarinta Shaqo-Abuurka iyo Wax-Soo-Saarka Kalluumaysiga:
Dhismaha iyo qalabaynta xarumo lagu tababaro kalluumaysatada iyada oo loo samaynayo barnaamijyo lagu diyaarinayo aqoonyahanno ka hawl-gala qaybta kalluumaysiga.
Dhiirri-gelinta is-kaashatooyinka iyo shirkadaha kalluumaysiga ee jira iyo abaabulka kuwo cusub oo ka hawl-gala xeebaha dalka.
Maal-gelinta daraasad soo uruurisa xogta sugan ee baaxadda qaniimadda kalluumaysiga ee Jamhuuriyadda Somaliland si loo dejiyo qorshe horumarineed oo ballaadhan.
Dhismaha suuqyada kalluunka oo qalabaysan ee magaalooyinka waaweyn si loo dhiirri-geliyo cunistiisa.
Horumarinta ganacsiga dhoofinta kalluunka iyada oo la korinayo kaabayaasha muhiimka ah ee wershedaha yar-yar iyo qaar waaweynba, gaadiidka, qaboojiyeyaal, doonyaha iyo suuq-geynta. Dhiirri-gelinta mashaariicda socota iyo soo-noolaynta kuwii hore sida Laas-qoray, lana maareeyeo kalluunka dibedda laga soo waarido.
Maal-gelinta gaadidka badda ee isku-xidha degaannada xeebaha iyo dekedaha si badeecaduhu ugu kala socodaan.
Soo-saarista iyo kabista dhaqaale ee doonyaha kalluumaysiga fibre-glass-ka’ah iyo qalabkooda.
Horumarinta iyo is-kaashiga suuq-geynta dalaka deriska iyo caalamka,
Dhiirri-gelinta mashaariicda beeridda iyo tarminta kalluunka.
Ilaalinta dhul-xeebeedka u gaarka J/Somalailand (EEZ), laga ilaaliyo sunta, xaalufinta iyo budhcad-badeedka.
Korinta iyo Shaqo-Abuurka Wershadaynta:
Tartanka xoogga badan ee ka imanaya alaabta jaban ee dibedda laga keeno ayaa aad u wiiqa tamarta iyo korriinka warshadeynta dalka. Xukuumadda Xisbiga WADDANI, waxa ka go’an in ay si mugleh oo qorshaysan u gacan-qabato wershadaynta alaabta iyo wax-soo-saarka gudaha si shaqo loo abuuro.
Samaynta siyaasad cad oo ah gacan-qabashada warshadeynta iyo xakamaynta tartanka aan xaalaasha ahayn ee alaabta lagu soo qubo dalka, kaas oo wiiqa korriinka warshadaheena.
Dib-u-habaynta xeerka wax-iibsiga dawladda (National Procurement Act) si mudnaanta kowaad loo siiyo wax-soo-saarka dalka.
Xoojinta rugta ganacsiga iyo in la abuuro gole dawladda ah oo horumariya dhoofinta alaabta iyo wax-soo-saarka Jamhuuriyadda Somaliland.
Maal-gelinta tamar tayo leh qiimeheedana la awoodi karo, si loogu adeegsado warshadeynta.
Dib-u-eegista xeerarka saameeya maal-gashiga caalamiga ah iyada oo la dhiirri-gelinayo isla markaana la daryeelayo ganacsiga tafaariiqda.
Korinta iyo ilaalinta farsamooyinka soo-jireenka ah ee gudaha gaar ahaan kuwa ay ku nool yihiin dan-yartu sida kabaha, bir-tumista, geerashyada iyo farshaxanka.
Habaynta baahiyaha farsamooyinka aynu dibedda uga baahan nahay iyo kuwa dalka gudhiisa laga helayo, kuwaas oo u-gaar noqon doona muwaaddiniinta Jamhuuriyadda Somaliland.
Hirgelinta carwooyin dibedda iyo gudaba lagu soo bandhigayo wax-soo-saarka warshadeysan ee dalka.
Taageerada hay’adaha cilmi-baadhista iyo isku-xidhka warshadleyda.
Samaynta aagag u gaar ah warshadaha iyada oo kaabayaashii iyo adeeggii loo baahnaa lagu rakibayo.
Samaynta dhul-warshadeedka xorta ah (Industrial Free-zone) si loogu soo jiito maal-gashi caalami ah oo gaar ahaan xeebaha iyo xuduudahaba laga abuuro.
Maal-gelinta Warshadda birta ee kabka iyo toornada samaysa kuwaas oo warshadaha dalku u baahanyihiin, waxa lagu dhisayaa iskaashi maalgelineed oo dawladdu hoggaaminayso.
Dhiirri-Gelinta Hibada iyo Xirfadda Ganacsiga ee Dadka Jamhuuriyadda Somaliland
Xukuumadda WADDANI waxa ka go’an in ay dhiirri-geliso oo hawl-geliso hibada iyo xirfadda ganacsi ee ay dadka Jamhuuriyadda Somaliland ku caan-baxeen.
Dejinta siyaasad tifa-tiran iyo hab-maamul ay Jamhuuriyadda Somaliland ku noqoto xuddun heer caalami ah oo ganacsiga dalalku isu-maro iyo adeeggooda (transit trade) iyada oo laga khibrad-qaadanayo meelaha ka midho-dhaliyey hab-dhaqaaleedkan sida: Dubai, Singapore, Hong Kong, Taiwan iyo Djibouti.
Ka-samaynta Berbera iyo xeebaha kale ee Jamhuuriyadda Somaliland adeeg dekedeed oo xor ah (free port services) iyo bar-dhaqaaleedyo xor ah (free-economic zones).
Iska-kaashiga dalka Ethiopia iyo Maamul gobolkeedka 5<sup>aad</sup> ee inala deriska ah sidii aynu u wada yeelan lahayn xuduud furan isuguna adeegi lahayn ganacsiga dalalka isu mara.
Korinta dekedaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo shirkadaha ka shaqaysta sidii ay adeeg heer caalami ah u bixin lahaayeen.
Raadinta in ganacsiga Jamhuuriyadda Somaliland la leedahay dalalka derisku noqdo mid ay mudnaan gaar isa siiyaan.
Badeecadaha Jamhuuriyadda Somaliland dibedda u dirto oo ay ka ballaadhiso ku-tiirsanaanta dhoofinta xoolaha nool oo keliya.
Fududaynta hawlaha liisamada iyo is-diiwaangelinta shirkadaha iyo sida meel keliya loogu wada dhammayn karo wixii xafiisyda dawladda looga baahanyahay.
Xaqiijinta in Jamhuuriyadda Somaliland noqota xuddunheer caalami ah ooadeegga bangiyada iyo ganacsiga maaliyadda ah iyo ku suntanaanta afaafka laga galo Afrika ee Gacanka Cadmeed.
Xukuumadda Xisbiga WADDANI waxa ka go’an in ay u hawl-gasho sidii ganacsiga maaliyadeed ee Jamhuuriyadda Somaliland u kori lahaa, si uu u hanto baahida maal-gelinta iyo korriinka wax-soo-saarka dhaqaale ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Xukuumadda Xisbiga WADDANI, Waxay Ku Tallaabsan Doontaa:
Xoojinta Bangiga Dhexe ee Jamhuuriyadda Somaliland si uu u hubiyo ku dhaqanka shuruucda dalka iyo kuwa caalamka ee hay’adaha ka ganacsada lacagta, isla markaana sugo badbaadada lacagta dadweynaha, maal-gashigooda iyo ku dhaqanka habka ganacsiga LC.
Dhammaynta sharciga bangiyada ganacsiga si loogu helo ilo maal-gelineed gancsiga soo koraya gaar ahaan ka dhallinyarada, kaas oo ku dhisan tartanka suuqa xorta ah. Xukuumadda Xisbiga WADDANI waxay dhiirri-gelin doontaa maalgelinta bangiyo caalami ah oo ay ka reebban tahay isticmaalka ribadu, abuurayana shaqooyin. Mar walba ribadu way ka reebban tahay ganacsiga maaliyadeed ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Dhiirri-gelinta hay’adaha maal-gelinta siiyaa qaybaha dhaqaalaha ee ay Xukuumadda Xisbiga WADDANI u qoondaysay gacan-qabasho sida shaqo-abuurka dhallinyarada iyo kuwa saamaynta ku leh caddaaladda bulshada ee danyarta iyo qaybaha dulman u adeegaya. Hay’adaha maal-gelinta noocaas ah bixinaya dawladdu waxay siinaysaa dhiirri-gelin cashuur-dhimis ah.
Samaynta bangiga horumarinta Jamhuuriyadda Somaliland oo gaar ahaan maalgelinaya wax-soo-saarka xoolaha, beeraha, kalluumaysiga, faleenka, macdanta, warshadaha, tamarta iyo kaabayaasha koboca wax-soo-saarka.
Sugidda in ay bangiyadu haystaan kaydka (reserve) lacagta adag ee sharcigu jideeyey.
Horumarinta Dekedaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo ganacsiga sii-marka ah (transit)
Xukuumadda Xisbiga WADDANI, waxay horumarin doontaa dekedeheenna si ay u dhiirri-geliso ganacsiga sii-marka ah ee Ethiopia iyo dalalka gobolka Harooyinka Waaweyn ee Afrika iyadaoo maal-gelin u raadin doonta dhismaha kaabayaasha bad iyo berriba looga baahanyahay.
Dhammaystirka iyo hawl-gelinta hinidisaha la magac baxay “Marinka Berbera” (Berbera Corridor) iyo marinno kale oo u adeega Ethiopia sidii hadba loogu baahdo.
Kor-u-qaadista awoodda dekedda Berbera si ay ula tartanto dekedaha kale ee gobolka.
U-diyaarinta dekedda Berbera in ay si mugleh ugu adeegto ganacsiga dalka Ethiopia iyo Afrikada kale ee aan badda lahayn. Ka-midho-dhalinta addeegga tareen oo ka mid noqda hindisayaasha Marinka Berbera.
Casriyeynta maamulka iyo qalabka dekedda Berbera.
Xoojinta adeegga kontaynarrada, iyada oo la ilaalinayo in aan taasu meesha ka saarin ganacsigii yaryaraa ee soo-dejinta gudaha.
Soo-nooleynta, dib-u-dhisidda iyo hawl-gelinta dekedihii kale ee xeebaha ku taxnaa.
Horumarinta ganacsiga kale ee sii-marka ah sida kaydka shidaalka, kaydinta badeecadda iyo qorshaynta dhul warshadeynta u gaar ah.
In laga sameeyo dekedda Berbera “dry dock”, kaas oo maraakiibtu ka hesho adeegga farsamada fudud.
Xaqiijinta in Jamhuuriyadda Somaliland ku Caan-Baxdo Tayada ICT-ga:
Horumar xooggan ayey Jamhuuriyadda Somaliland ka samaysay intii ay jirtay dhinaca aqoonta iyo adeegsiga teknoolajiyada ICT, gaar ahaan dhallinyaradu. Xukuumadda Xisbiga WADDANI waxa ka go’an in ay u hesho maal-gashi caalami ah oo toos ah, si ay awooddeenna ICTga ay tayo iyo tiroba u sii koriso.
Xukuumadda Xisbiga WADDANI xagga ICTga, waxay ku tallaabsan doontaa:
Nidaaminta shuruucda iyo hab-dhaqanka ganacsiga is-gaadhsiinta si looga helo adeeg hufan loogana taageero sidii uu dhallinayarada ugu abuuri lahaa shaqooyinka tayadoodu sarrayso ee aqoonta teknoolajiyada casriga adeegsada.
Dhiirri-gelinta qaybaha ganacsiga adeegsada ICTga ee dhallinyaradu shaqo ka hesho sida: call-centres, e-business, desktop printing, internet café.
Habaynta siyaasadda iyo dhiirri-gelinta ganacsiga warbaahinta si ay shaqo u abuurto, sida: TV-yada, Radyowga, baraha bulshadu ku kulanto, warsidayaasha xidhiidhsan iwm.
In Jamhuuriyadda Somaliland ka guurto qarniga warqadda una guurto qarniga adeegga fudud (software-ka) iyo database-ka’ si loo helo xog-wadaag isku-xidhan.
Xil-Kasnimo Ku-Maamulka Khayraadka Dabiiciga Ah:
Waxaynu leenahay kheyraad tamareed oo mugleh oo ay ka mid yihiin uguna mudan yihiin saliidda iyo macdanta kale ee qiimaha leh. Xukuumadda Xisbiga WADDANI waxay u maamulaysaa si daah-furan oo ka reebban musuq-maasuq, qaraabo-kiil iyo kooxaysi. Waxaynu adeegsan doonnaa khibradda la keydiyay ee caalamka, innaga oo dheeftana ka faa’daysanayna, dhibtana ka badbaadayna.
Xeerka: Ansixinta iyo hirgelinta xeerka khayraadka dabiiciga ah
Heshiisyada caalamigaah oo si daah-furan loo galo, golayaasha xeer-dejintana la mariyo si ay ansax u noqdaan.
Siyaasadda khayraadka dabiiciga ah:
; Diyaarinta siyaasadtifatiran oo ku subsaabsan saliidda dhulkeena ku jirta oo taabanaysa dhinacayada: liisanbixinta hore, liisanka farsamaynta, soo-saarista, joojinta soo saarista iyo ka-guurka.
; sugidda in hawlgalkuyahaya mid la jaanqaadadanaheennaqarannimo iyo badbaadadadegaanka, xeerka shaqaalaha, iyo qawaaniinta kale ee dalka.
; U-maamulkasi daahfuran dhaqaalaha ay bixiyaan shirkadahashiddaalku
Dhiirri-gelin cashuur-dhaafqalabaka iyo gaadiidka shirkadaha baadhista iyo maal-gelinta macdanta iyo shidaalka.
Xukunka: Samaynta iyo hawl-gelinta hay’ado madax-bannaan oo la xidhiidha Wasaaradda ku shaqo leh, si loo hubiyo maamul daah-furan; waxa ka mid ah ha’dahaas Health and Safety Agency (HSEA).
Wax-ka-barashada waayo-aragnimadaNorway iyo Botswana sida loo maamusho dhaqaalaha kheyraadka dabiiciga ah sida shidaalka iyo macdanta qaaliga ah.
Siyaasad Dhaqaale oo Dheellitiran:
Hirgeinta siyaasad dhaqaale oo wejiyo badan (diversified) iyo mid maaliyadeed oo dheelli-tiran, si looga badbaado waxa loo yaqaan “habaarka khayraadka Dabiiciga ah”.
Samaynta Shirkadda Shidaalka Qaranka taas oo saamilaha weyni yahay dawladda, inta kalena dadku maalgashadaan.
Kobcinta wax-soo-saarka soo jireenka ah: Dakhliga shidaalka oo lagu maal-geliyo kobcinta iyo dhaqaalaha qaybaha wax-soo-saarka soo-jireenka ah ee xoolah, beeraha, kalluumaysiga iyo xabkaha.
Warshadaynta: Korriinka dhinaca wax-soo-saarka warshadaysan gaar ahaan kuwa ka farcama shidaalka.
Maal-gelinta Aqoonta sare:Soo-saarka kaadir tababaran oo aqoon sare u leh dhaqaalaha ka farcama shidaalka iyo badeecadaha ka dheegma.
Wacyi-gelinta bulshada degaannada shidaalkalaga baadhayo ama laga qodayo iyo daryeelka baahiyahooda horumarineed iyada oo loo dammaanad qaadayo in laga daboolo dhibka ku iman kara degaanka iyo noloshoodaba.
Daryeelka bulshada degaanka shidaalka: Qoondaynta dawladda gobolka laga qodayo shidaalka boqolaygo’an oo dakhliga ah si loogu dheelitiro dhibka hawlgalka qodaalka iyo culayska dadka shaqo-tagga ku soo burqanaya ee degaanka iyo nolosha ijtimaaciga ah iyo in la horumariyo kaabayaasha dhaqaale iyo addeegyada asassisga ah.
Sanduuqa Jiilalka soo socda:Hirgelinta sanduuq lagu kaydiyo qayb ka mid ah dakhliga shidaalka iyo macdanta oo loo qoondaynayo kobcinta aqoonta sare iyo horumarinta mustqablka ee jiilalka soo socda.
Horumarinta qaybta Tamarta:
Dejinta siyaasad cad oo ay ku dhiirigelinayso shirkadaha tamarta ka shaqaysta, maalgashiga tamarta cadceedda iyo dabaysha kaas oo ku soo baxaya qiima suuragelinaya horumarka wax-soo-saarka dalku ku kori karo.
Xeerarka:Diyaarinta xeerarka tayeynta dhaqaalaha waaxda tamarta.
Habraaca Heshiisyada: Fududaynta iyo hirgelinta qaabka astaysan oo ay raacayaan shirkadaha waddaniga iyo shisheeyuhuba ee maalgashanaya khayraadka dabiiciga ah kaas oo ku salaysan dastuurka iyo xeerarka Jamhuuriyadda Somaliland.
Tayada shidaalka: Sugidda tayada shidaalka la soo dejiyo ee dalka lagu isticmaalo.
Haynta Kayd shidaaloo ku filan dhaqaalaha dalka.
Dhiirri-gelintaa maalgashiga kaydka iyo haamaha shidaalka.
Dhalinta tamarta dabayshasi loo horumariyo bulshooyinka xeebaha Jamhuuriyadda Somaliland.
Dhiirri-gelinta maal-gashiga tamarta nadiiftaah si loo sameeyo beero lagu dhaliyo tamarta cadceedda, dabaysha iyo ta kulaylka dhulka hoostiisa (geothermal) oo laga adeegsado miyi iyo magaaloba.
Biyaha:Tamarta cadeceedda iyo dabaysha oo lagu soo saaro biyaha
Gaaska dabiicia ah:Ku-beddelka dhuxusha geedaha ee gaasaska dabiiciga iyo dhuxul-dhagaxa.
Shebekadda Korontada Qaranka oo Xor ah:Iskaashiga dawladda iyo ganacsatada gaarka ah, maal-gelinta dhismaha shebekadda korontada qaranka iyo maamulkeeda si loo helo adeeg dadku awoodo iyo mid ku filan baahida wax-soo-saarka iyo warshadaynta.
Samaynta daraasad Dhuxul-dhagaxda dalka sidii looga faa’iidaysan
Dhirri-gelinta shirkadaha caalamka, sida dayuuaradaha, hodheelada, kuwa dalxiiska ka shaqeeya iyo shirkadaha guduhuba in ay maal-gashadaan xeebteenna iyo buuraleyda ku qoofalan ee hadda aan la xoolayn.
U-bandhigga dhaqankeenna iyo goobaha raadadka taariikheed sida: Laas-geel oo aynu u bandhigeyno in ay noqoto baraha dhowrsoon ee caalamiga ah ee UNESCO.
Fidinta taariikhda ummadda Somaliland, halgannadii xoraynta e kala dambeeyey iyo himilada aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland.
Ka-faa’iideysiga Awoodda Baaxadda leh ee Qurbe-joogga
Bulshooyinka Qurbe-joogga Somaliland waxay wax badan ka qayb-qaateen heerarkii kala duwanaa ee xoraynta, nabadaynta, dib-u-dhiska iyo horumarinta Jamhuuriyadda Somaliland. Waxay weli ku hawlanyihiin sidii ay J/Somaliland u noqon lahayd dawlada dastuuri ah oo door firfircoon ku leh siyaasadda iyo dhaqaalaha geesk Afrika iyo caalamkaba.
Kor-u-qaadista hannaanka Xawaaladaha iyo in laga dhigo nidaam waara isla markaana ka qayb-qaata qorsheyaasha horumarka dalka oo ay ku jiraan hannaanka bangiyada iyo horumarinta
Ka-faa’iideysiga awoodaha qurba-joogga iyo u-abuurista dareen soo jiita maal-gashadayaal muwaaddiniin ah iyo kuwo caalami ahba.
Soo-guurinta aqoonta iyo xirfadaha qurbajoogga; sida aqoonta la xidhiidha: dhismaha qaranka, dawladnimada, dimuqraaddiyadda, technolojiyada iyo aqoonta iyo xirfadda sayniska, dhaqaalaha iwm.
Waxay Xukuumadda WADDANI u samayn doontaa hay’ad awood leh dhiirrigelinta iyo u fududaynta ku soo noqodka iyo siyaarashada dalka. Waxay u fududayn doontaa degaanka; waxay taageerai doontaa ilaalinta hantidooda; waxa loo fududayn doonaa adeegyada xafiisayada dawladda haddii ay maalgashi samaynayaan.
Kooboca dhaqaalaha iyo shaqo-abuurka
Wax-soo-saarka cuntada: in kor loo qaado wax-soosaarka Xoolaha, beeraha iyo kalluumaysiga
Khayraadka dabiiciga: Soo-saarista khayraadka Shidaalka iyo Macdanta dalkeenna ceegaaga.
Shaqo-la’aanta: hoos looga dhigo magaalada heerka maanta 29% ilaa ka-hoos 10%; miyigana heerka maanta ee 38% ilaa ka-hoos 15%; iyo dheelli-tirka shaqo-haynta lammaanaha iyo gacanqabashada bulshooyinak dulman.
Xabkaha:in la gacan-qabto wax-soo-saarka waaxda xabkaha lana daryeelo degaankooda.
Tamarta:daraasadda iyo warshadaynta dhuxul-dhagaxda, ka-dhalinta cadceedda iyo dabaysha, ka soo iibsiga dalalka deriska, iyo ka midho-dhalinta soo-saarista shidaalkeenna.
Warshadaynta wax-soo-saarka gudaha:ee xoolaha, beeraha, kalluumaysigaba, xabkaha, milixda iyo dhagxanta qaaliga ah.
Warshadaynta agabka dhismaha:Sibidka iyo agabka kale ee laga helo dalka gudihiisa.
Kadinka Afrika: Dhamaystirka “Mashruuca Marink Berbera” (Berbera Corridor) iyo korinta dekadaha kale ee ku taxan xeebteenna iyo madaarrada.
Adeegga maaliyadda iyo isgaadhsiinta:in Jamhuuriyadda Somaliland isu diyaariso sidii ay ugu faa’iidaysan lahayd barta ay ku taal ee xidhiidhisa adduunka Galbeed iyo bari, una noqon lahayd xuddun bixisa adeegga casriga ee teknooljiyada ku dhisan sida bangiyada, xawaaladda, isgaadhsiinta iyo ganacsiga sii-marka ah.
Abaabulka Qurba-joogga Somaliland:iyo in ay ka qayb-qaataan ganacsiga iyo maalgashiga isla markaana dalku ka faa’iideysto xirfadohooda iyo aqoontooda.
Dhiirigelinta maalgashiga xooggan ee tamarta nadiifta ah sida cadceedda iyo dabaysha, oo ay sameeyaan shirkadaha gudaha ee tamarta ka ganacsada, si loogu soo saaro qiime hoose oo suurageliya in warshadaynta iyo wax-soo-saarka dalku koraan.